A gam akporo - Animal na akwụkwọ ahụ aja | Gam akporosis
Budata nke kacha mma anụmanụ na akwụkwọ ahụ aja n'ihi na gị gam akporo. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na anụ ụlọ, ebe a ị ga-ahụ ụdị akwụkwọ ahụaja dị iche iche na ụdị anụmanụ dịgasị iche iche ka ị nwee ike ịhọrọ nke kachasị amasị gị.
Nhọrọ nke akwụkwọ ahụ aja maka gam akporo buru ibu. Mana ọ bụrụ na ị nwere mmasị nzụlite anụmanụ, mgbe ahụ nke a bụ ngalaba gị. N'ime ya ị ga-ahụ akwụkwọ ahụaja kachasị mma na ụmụ anụmanụ. Site na anụ ụlọ kachasị mma na anụ ọhịa mara mma. Ihe niile ịgbanwe ọdịdị ekwentị gị n'ụzọ kachasị mfe.
N'akụkụ a ị ga-enwe ike ịchọta ego kacha mma n'ime ụdị a. Yabụ ọ bụrụ na ị masịrị anụmanụ, ị gaghị echefu nhọrọ kachasị mma enwere maka ekwentị gam akporo gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ karịa na akwụkwọ ahụ aja, egbula oge ileta njikọ ahụ anyị hapụrụ gị.